ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်မှာ ပွဲကြည့်သူတွေကို နားဒုက္ခပေးသွားခဲ့တဲ့ ‘Despacito’
သင့်ကိုယ်သင် Despacito ရန်ကလွတ်ပြီထင်ပါသလား.. Winter Olympic ကြည့်သူတွေကတော့ “No” လို့ပြန်ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။
၂၀၁၈ PyeongChang အိုလံပစ်ရဲ့ Ice Dancing ပြိုင်ပွဲမှာ အဖွဲ့ပေါင်း ၃ ဖွဲ့တိတိက ‘Despacito’ သီချင်းနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားပြု Xinyu Liu နဲ့ Shiyue Wang တို့အတွဲ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုယ်စားပြု Alexander Gamelin နဲ့ Yura Min တို့အတွဲ၊ ပိုလန်နိုင်ငံကိုယ်စားပြု Maksym Spodyriev နဲ့ Natalia Kaliszek တို့အတွဲတို့က မနှစ်က ရက်ရက်စက်စက်ပေါက်ခဲ့တဲ့ Despacito သီချင်းကို သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သီချင်းအဖြစ် ရွေးချယ်အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။
Despacito makes it’s 3rd appearance in short dance #OlympicGames pic.twitter.com/Znioh3JN30
— Hoda Kotb (@hodakotb) February 19, 2018
ဘာကြောင့် Despacito ကိုမှရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလည်း.. အဲဒါကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ Ice Dancing Short Program မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာ လက်တင်သံစဉ်တွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုပြီး အိုလံပစ်ကော်မတီက စည်းကမ်းချမှတ်ထားခဲ့လို့ပါ။ အဲဒီတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့လည်း ဝေးဝေးလံလံရှာမနေကြတော့ပဲ ခေါင်းထဲချက်ချင်းပေါ်လာတဲ့ Despacito ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပုံပေါ်ပါတယ်။
ဒီ Despacito ပွဲတော်အပေါ် Twitter ရဲ့အမြင်ကတော့ ခွီချင်စရာလေးတွေပါပဲ..
Do @LuisFonsi and @daddy_yankee getagold medal for #Despacito ruling the @Olympics ICE dancing competition? #WinterOlympics
— Chris Garcia (@ChrisCG5) February 19, 2018
It’s the Duel of the Despacitos in ice dance tonight. #Olympics2018 #pyeongchang2018 #winterolympics #FigureSkating #IceDancing #Despacito
— We heart @ApoloOhno (@AAOsAwesomeFans) February 19, 2018
THERE ARE GONNA BE3DESPACITO SHORT DANCES TODAY. AND TWO OF THEM ARE BACK TO BACK. YOU HAVE BEEN WARNED.
— evie ⛸? 2-TIME OLYMPIC CHAMPION YUZURU HANYU (@doubleflutz) February 19, 2018
Reason number 364,459,031 why @juliaesmith is the best roomie and long distance #olympics watching parter ? #Despacito #IceDancing #WinterOlympics pic.twitter.com/qz40AFODiN
— Katie Rains (@KatieRainsCLT) February 19, 2018
Ref: Time, Billboard
PREVIOUS POST Previous post: Taylor နဲ့ Bieber တို့ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် နာမည်ကြီးလာရတဲ့ တက်သစ်စလေးတွေ
NEXT POST Next post: Billboard 200 Chart မှာ နံပါတ် ၁ နဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ ‘Black Panther: The Album’